Izulu eliBlue kuLwandle
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguHoliday Beach Rentals
UHoliday Beach Rentals unezimvo eziyi-265 zezinye iindawo.
UHoliday Beach Rentals ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Imiswe kunxweme oluhle lwase-Emerald yasePanama City Beach, iBlue Heaven On The Beach inamagumbi okulala ama-6, 6.5- igumbi lokuhlambela elitofotofo eliphambi kolwandle ikhaya elihonjiswe ngeCoastal Calm ambiance engqondweni. Onke amanqanaba eli khaya anemibono emangalisayo elunxwemeni eyenza ixesha lokuphumla ngaphandle nakweyiphi na i-balcony KUFUNEKA, suku ngalunye lokuhlala kwakho!
Njengokuba ungena eZulwini elithunyelwe ngaphambili elunxwemeni ekhaya elinemibala ekhanyayo neqaqambileyo, umgangatho wokuqala uyakwamkela ngegumbi elincinane lokuhlanganisa/indawo yokuhlala equka i-couch enecandelo kunye ne-flatscreen TV. Ukuba uqhubeka nokwehla ngepaseji ephambili, uya kufumana ifriji yokuqala yekhaya kunye nendawo encinci yokuntywila kunye negumbi lokuhlambela le-1/2, ezi mpawu zibekwe ngokugqibeleleyo ukuze ungade ube kude kakhulu echibini okanye echibini. elunxwemeni lokuluma ngokukhawuleza ukutya okanye ikhefu lokutya. Ngobuninzi bezitulo zegumbi lokuphumla kunye nezihlalo, unokupheka kwi-grill yamalahle kwaye ukhethe ukutya ngaphandle kwitafile yepikiniki njengoko ubukele amaza eqengqeleka. Masinyaniseke, ulwandle yiloo nto uzayo kwi-Emerald Coast, kodwa ukuba nephuli yabucala entle konke kuwe kuyayincamisa imbiza! Yiya ezantsi elunxwemeni kwenye yeendawo ezimbini zokungena elunxwemeni kanye ngaphandle komgangatho wepool, enye inebhodi yabucala kunye nenye yendalo ngokupheleleyo enesanti phakathi kweenzwane zakho kunye ne-oats yolwandle egoba kwimpepho!
Xa unyukela kumgangatho wesibini ungena kwindawo enkulu evulekileyo yokuhlala, indawo yokutyela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Esi sithuba kulapho unokuyonwabela khona loo komityi yekofu kusasa kunye neglasi yewayini ngokuhlwa kuba ungajonga ezo mbono ziphambi kolwandle nokuba ngaphakathi kwegumbi lakho lokuhlala elipholileyo okanye ngaphandle uhleli kwibalcony evulekileyo enomoya omninzi. iindawo zokuhlala. Relax kwi-sofa kunye ne-chaise lounge kwaye ubukele umabonakude okanye undwendwele nosapho kunye nabahlobo. Indawo yokutyela yangaphakathi ihlala 6-7 kunye nezihlalo ezongezelelweyo kwikhawuntara. Iseti yokuqala yamagumbi okulala akulo mgangatho oqulathe ukumkanikazi phezu kwegumbi lokulala lenkosi kunye negumbi lokulala lenkosi, ngalinye linendawo yalo yokuhlambela yabucala.
Njengoko ufika kwinqanaba lesithathu, ubuliswa nge-twin bunk nook enqabileyo ehlala ecaleni kwendawo eqhelekileyo (ibhedi iphinda ikhuphe kwindawo yokulala). Ukuba uthatha ekhohlo, kukho amagumbi amabini ongezelelweyo - elinye linokumkanikazi phezu kwebhedi enkulu kwaye elinye linebhedi yenkosi enye, ngalinye linendawo yalo yokuhlambela yabucala. Ibekwe elunxwemeni unamagumbi okulala ookumkani aba-2 ababelana nge-balcony yokuphuma enefenitshala eneembono ezintle zaselwandle kunye nezabo zokuhlambela ezigcweleyo zabucala. Ikwabekwe kulo mgangatho yiwasher kunye neeyunithi zokomisa.
*Ukuba unomdla wokwenza nawaphi na amakhaya ethu obutofotofo abe yinxalenye yesicwangciso sakho somsitho, nceda yazi ukuba kukho umrhumo owongezelelweyo onxulumeneyo. Sitsalele umnxeba ngeenkcukacha
*Idama lokufudumeza likhona ngeendleko ezongezelelweyo.
Umgangatho wesi-2-Ukulala 6
*Igumbi lokulala likaKumkani eline-En-Suite, ukuJonga isitalato (silala 2)
*Igumbi lokulala likaKumkanikazi phezu kweKing Bunk ene-En-Suite, imbonakalo yesitalato (ilala 4)
Umgangatho wesi-3-Ukulala 10
*Igumbi lokulala likaKumkani eline-En-Suite, imbonakalo yaseLwandle (ilala 2)
Umgangatho wesi-3 weNdawo eQhelekileyo-zokulala 4
*Isofa kaKumkanikazi yokulala (ilala 2)
*I-Twin Bunk Nook (ilala 2)
*Izulu Eliluhlaza lifuna ubuncinci ubusuku obu-7 kulo lonke ugcino ngexesha lokungena/lokuphuma kwishedyuli engezantsi:
Ikhefu loSapho: Matshi 12 - Epreli 9 (ngoMgqibelo - ngoMgqibelo)
Ehlotyeni: Juni 4 – Agasti 12 (ngoMgqibelo – ngoMgqibelo)
Ikhefu lekwindla: Oktobha 1-Okthobha 15 (ngoMgqibelo - ngoMgqibelo)
Ikhefu loSapho: Matshi 11 – Epreli 8 (ngoMgqibelo – ngoMgqibelo)
Ehlotyeni: 3 Juni - Agasti 12 (ngoMgqibelo - ngoMgqibelo)
Ikhefu lekwindla: Septemba 30 - Oktobha 14 (ngoMgqibelo - ngoMgqibelo)
Izulu eliBlue kuLwandle libekwe kwi-East End yePanama City Beach. Uya kuzifumana kumgama wokuhamba weendawo ezininzi ezinomtsalane kunye neeresityu, kuphela eyona nto ingcono elunxwemeni, kodwa usenayo isiqwenga sakho esincinci separadesi.
Umbuki zindwendwe ngu- Holiday Beach Rentals
Abasebenzi bethu bafumaneka 24/7.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R16081